WTTC: Ebe echi bụ Botswana
Home » Njikọ Mkpakọrịta Akụkọ » WTTC: Ebe echi bụ Botswana
World Travel & Tourism Council (WTTC) nwere obi ụtọ ịkpọsa ndị mmeri nke 2017 Nlegharị Anya maka Echi Onyinye.
The Nlegharị Anya maka Echi Onyinye na-eme ememme nkwado, usoro njem nlegharị anya nke ụwa niile. A na-enye onyinye n'ụdị ise, nke gosipụtara ebumnuche WTTC nke 'imezi ọdịmma nke ndị mmadụ, mbara ala na uru'.
N'ikwekọ na Afọ Mba Ndị Dị n'Otu nke Njem Nleta Na-ahụ Maka Ọganihu nke Mba Ndị Dị n'Otu, yana nkwenye siri ike nke WTTC maka ngalaba na-acha akwụkwọ ndụ, nke ga-adigidekwu, ndị mmeri nke Awards 2017 bụ ndị a ma ama maka echiche ha na-aga n'ihu na gburugburu ebe obibi. Ndị mmeri ahụ na-enyekwa aka na Ebumnuche Sustainable Development (SDGs) nke edobere na UN's 2030 Agenda.
Afọ a Nlegharị Anya maka Echi Awards ememe ahụ mere na 27 Eprel, n'oge 17th WTTC Global Summit, nke emere na Bangkok, Thailand.
Ihe nrita nke ndi njem nlegharị anya nke 2017 maka echi bu:
Community onyinye - Ol Peteja Conservancy, Kenya
Onyinye Ebe - Chobe, Makgadikgadi, na Okvango delta Ramsar saịtị, Botswana Tourism Organisation, Botswana
Onyinye Gburugburu - Misool, Indonesia
Innovation award - Mapping Ocean Wealth, Nature Conservancy, USA
ndị mmadụ award - The J Willard na Alice S Marriot Foundation si China Hospitality Education Initiative (CHEI), China
Ndi otu ndi okacha amara na-ekpe ikpe a. Ndị gụrụ akwụkwọ, ndị isi azụmaahịa, ndị otu NGO na ndị nnọchi anya gọọmentị niile na-esonye ike iji mee ka ndị ikpeazụ merie naanị ndị mmeri ise. Comingghọ a Nlegharị Anya maka Echi ọka ikpe abụghị ọrụ a ga-eji gwurie egwu - usoro ikpe ikpe nke atọ, gụnyere nyocha nke ngwa niile, yana nyocha saịtị na ndị ikpeazụ na ebumnuche ha.
David Scowsill, Onye isi ala na onye isi ala, WTTC, kwuru, sị: “Obi dị m ụtọ na ọkwa dị elu nke ndị ikpeazụ anyị niile. Ndị na-ewepu Awards n'afọ a na-anọchite anya ndị kachasị mma na njem nlegharị anya, anyị nwere olile anya na ihe atụ ha ga-akụziri ndị ọgbọ ha ma duga ngalaba ahụ n'ihu.
Ngalaba njem na njem na-eto ngwa ngwa, ma anyị kwesịrị ịgba mbọ hụ na uto a anaghị ahụ uru dị mkpirikpi ka e butere maka ahụike ogologo oge nke gburugburu na obodo. Ndi mmeri ndia n’enye n’ahu n’aho o na egosiputaghi na njem nleta bu nke ga adigide, kamakwa na o nwere ike weta mmeghari anya gbara gburugburu na gburugburu ebe obibi ya. Anyị ga-ahụ ndị njem na njem njem na-anya n'ihu iji hụ na ụwa ga-adigide. "
Fiona Jeffrey, OBE, Oche, WTTC Nlegharị Anya maka Echi Awards kwuru, sị: “Afọ a Nlegharị Anya maka Echi Ndị mmeri meriri na-aga n’ihu na-akwagide usoro nkwado ma na-aga ije n'okwu ahụ gbasara ịzụlite ngalaba ka mma, ọrụ na-aza ajụjụ, na ahụmịhe njem nlegharị anya na mbara ala echedoro. Enweghị nke a site na obere oge.
Companieslọ ọrụ ndị a egosila na mmepe na-aga n'ihu nọ n'obi DNA ha ma ha na-eku ume ma na-eku ụkpụrụ ndị a na nsonaazụ akụ na ụba, gburugburu ebe obibi na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ha bụ ezigbo ndị nlereanya anyị niile nwere ike isi na ya mụta ma tinye n'ọrụ na azụmaahịa ụwa niile.
Jeff Rutledge, onye isi oche, AIG Travel, ndị isi nyere nkwado nke onyinye ndị a kwuru, sị: “2017 Nlegharị Anya maka Echi Award Winners bụ mmụọ nsọ nye anyị niile. Site na ike obodo ndi ha sitere na ya site na nchekwaba ha na ebumnuche ha, ndi mmeri anyi na ndi ikpeazu na egosiputa na nkwado na eme ezigbo ihe nye ndi njem na ndi njem.
Maka ozi ndị ọzọ gbasara njem nlegharị anya maka echi na ndị mmeri niile, biko gaa na www.wttc.org/tourism-for-tomorrow-awards
Mbido ndekọ maka Heathrow na 2017
Ndị ọrụ gọọmentị thailand dị elu kwuru ee maka njem na nzuko WTTC